आफ्नो मृगौला आफै बचाउँ « News of Nepal
आफ्नो मृगौला आफै बचाउँ
आफ्नै लापर्वाहीले मान्छेमा रोग पलाउने धेरै परिस्थीतीहरु हुन्छन । नेपालमा मिर्गौला रोगी बढिरहेका छन् । मिर्गौला बचाउनुपर्छ भन्ने चेतना हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्यप्रति हेलचेक्र्याइँ गर्ने कारण मिर्गौला रोगीको संख्या बढ्दै गएको विशेषज्ञहरुले जनाएका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा २६ लाखभन्दा बढी मिर्गौला रोगीहरु रहेको तथ्यांक छ ।
तीस लाखभन्दा बढी मानिसमा कुनै न कुनै प्रकारको मिर्गौलासम्बन्धी समस्या रहेको बताइन्छ । चितवनको परिप्रेक्ष्यमा दस प्रतिशतभन्दा बढी मानिस मिर्गौलाका कुनै न कुनै समस्याबाट पीडित छन् । नेपालमा बर्से्नि मिर्गौला दिवस, सचेतना अभियान सञ्चालन गरिए पनि कमै व्यक्तिमात्र मिर्गौला रोगबारे सचेत रहेको पाइन्छ । नेपालमा तीन लाख व्यक्तिमा केही न केही मिर्गौलाको समस्या रहेको चिकित्सकहरुको अनुमान छ । यस्तै, तीन लाख व्यक्तिको मिर्गौला बिग्रन थालिसकेको अवस्था र तीस हजार व्यक्तिको मिर्गौला निको पार्न नसक्ने गरी बिग्रिसकेको अनुमान छ । यसमध्ये बर्सेेनि तीन हजार जनाको मिर्गौला बिग्रेर अन्तिम अवस्थामा पुग्ने गरेको र नौ सय जनाको अकालमा मृत्यु हुने अनुमान छ । मिर्गौला बिग्रेर अन्तिम अवस्थामा पुगेका बिरामीलाई बचाउन डाइलासिस वा मिर्गौला प्रत्यारोपण नै गर्नुपर्छ ।
मिर्गौला हरेक मानिसलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्ने प्रमुख अंग हो । यस्तो महत्वपूर्ण अंग स्वस्थ राख्न हरेक व्यक्ति सचेत हुनैपर्छ । नेपालमा प्रत्येक दस जनामध्ये एक जनालाई मिर्गौलाको दीर्घकालीन रोग लाग्ने गरे पनि स्वास्थ्यका सवालमा शिक्षित व्यक्तिसमेत सचेत नहुनु विडम्बनाको विषय हो । अस्वस्थ जीवनशैली, रक्तचाप, मधुमेह, जथाभावीरुपमा कडा औषधि सेवनका कारणले मिर्गौला बिग्रने गर्दछ । सुरूमै कुनै लक्षण नदेखिने भएकाले बाहिरबाट स्वस्थ मानिएको व्यक्ति पनि स्वस्थ नहुन सक्छ । मिर्गौलाको स्थिति थाहा पाउन समय–समयमा परीक्षण गराउनैपर्छ ।
नेपालमा पछिल्लो समयमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरलगायत विभिन्न सचेतना कार्यक्रम गरी मिर्गौला रोगको निदान, उपचार र रोकथाम भइरहे पनि यसबारे गम्भीरतापूर्वक चासो लिनेको संख्या भने अझै पनि नगन्य नै छ । दुर्गम क्षेत्रमात्र होइन, सुगम ठाउँमा पनि मिर्गौला परीक्षण गर्ने प्रवृत्ति घट्दो छ । अधिकांशलाई जटिल स्वास्थ्य समस्या भइसकेपछि वा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा मिर्गौला बिग्रिएको जानकारी हुने गरेको छ । खासगरी, बदलिँदो जीवनशैलीका कारण मिर्गौला रोगीको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । चिकित्सकहरुले वर्षमा दुईपटक नभए कम्तीमा एकपटक अनिवार्य मिर्गौला जाँच गर्न सुझाव दिएका छन् ।
बढ्दो उमेरसँगै मिर्गौला रोगको खतरा पनि बढ्ने भएकाले सामान्य उपायद्वारा यो रोग न्यूनीकरण गर्न सकिने चिकित्सकहरुको सुझाव छ । त्यसका लागि सधैँ मधुमेह नियन्त्रणमा राख्ने, उच्च रक्तचाप भएकाहरुले नियमित जाँच गराउने, स्वस्थ र सन्तुलित खाना खाने, व्यायाम तथा हिँड्डुल गर्ने, तौल बढ्न नदिने, प्रशस्त पानी पिउने, धूमपान र सुर्ती सेवन नगर्ने, जथाभावी औषधिको प्रयोग नगर्नेजस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु बुद्धिमानी कार्य हो । तसर्थ, मिर्गाैला बचाउन गम्भीरताका साथ नियमित जाँच गराउर्नेतर्फ ध्यान दिनु उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
कविता पोख्रेल, कलंकी ।
यी जनप्रतिनिधिबाट केही सिक्ने की ?
सुविधाभोगी जनप्रतिनिधिका बिचमा बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीले उदाहरणीय कार्य गरेर जनताको मन जितेको खबर सार्वजनिक भएको छ । स्थानीय तहमा अधिकांश मेयर र गाउँपालिका प्रमुखले जनताको करबाट महँगो सवारी किनेर उपयोग गरिरहँदा मेयर नेपालीले आफ्नै सवारीसाधन उपयोग गरिरहेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, उनले हालसम्म नगरपालिकाबाट पाउने तलबभत्ता र इन्धन सुविधासमेत नलिईकन अहोरात्र जनताको काममा तल्लीन रहेका छन् ।
आफू जुन दलबाट प्रतिनिधित्व गरे पनि नगरपालिकालाई दलको अखडा बन्न नदिने, राजनीतिकरुपमा कसैलाई भेदभाव नगर्ने र सुशासनको थालनी आफैँबाट गर्ने जुन उदाहरण मेयर नेपालीले प्रस्तुत गरे त्यो प्रशंसनीय छ । जनताको आँखाको आँसु पुछ्न जनप्रतिनिधि भएकाले धेरथोर परिवर्तन गरेरै देखाउने जुन उद्देश्य उनले बोकेका छन् त्यसमा उनी सफल भएका छन् । उनले निजी खर्चमै आगलागीबाट क्षति भएका ४६१ घरमा जस्तापाता लगाउनेदेखि पहिरोपीडितको घर बनाइदिने कार्य गरेका छन् । जनता क्याम्पसका लागि २१ लाख सहयोग गर्नुका साथै शून्य दरबन्दीमा चलेका विद्यालयहरुमा व्यक्तिगत खर्चमा ५१ शिक्षकलाई नियुक्ति दिएर पढाउने व्यवस्था मिलाएका छन् ।
राज्यले नै गर्न नसकेको काम एउटा जनप्रतिनिधिबाट हुनु चानचुने कुरा होइन । किनभने, हाम्रो समाजमा सम्पन्नशाली जनप्रतिनिधिले पनि जनताको करमै ¥याल चुहाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा गरिब, दीनदुःखीको सेवामा आफ्नो तलबभत्ता र निजी सम्पत्ति लगाउनु महान् कार्य हो । उनले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विपन्न, दलित, अपांग र एकल महिलालाई निःशुल्क यातायातको व्यवस्था गर्नेदेखि एकल खर्चमा बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई एम्बुलेन्ससमेत सहयोग गरेर योगदान गरेका छन् ।
जनप्रतिनिधिले सरकारी बजेट सकेर विलासी गाडी र विद्युतीय सामग्रीहरु खरिद गर्ने होडबाजी चलिरहेका बेला ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयरले आफूभन्दा माथि उठेर जनताको सेवामा अहोरात्र जुटिरहेको खबरले केही जनताकै वास्तविक प्रतिनिधि पनि चुनिएका रहेछन् भनेर गर्व महसुस हुन्छ । एक समय एक छाक भात खान दसैँ नै कुर्नुपर्ने अवस्था भएका नेपालीले विगतमा विभिन्न व्यवसायमा पाएको सफलताले आर्जन गरेको सम्पत्ति अहिले जनताको सेवामा लगाइरहेका छन् । मानिसलाई धनसम्पत्ति र सुविधा कति भए पुग्छ ? यसको कुनै मापन छैन । संसारमा अब मलाई धनसम्पत्तिले पुग्यो भन्ने मानिस पनि सायद विरलै फेला पर्लान् !
मेयर नेपालीजस्तै केही जनप्रतिनिधिले आफ्नो सेवासुविधाको रकमले समाजसेवा र मानवसेवामा खर्चिएको सुन्न पाउँदा खुसीको रक्त सञ्चार हुन्छ । केही जनप्रतिनिधिले आफूले पाउने तलबभत्ताबाट गरिबलाई लत्ताकपडा वितरण गरेको, औषधि उपचारमा सहयोग गरेको, सडक निर्माणमा लगाएको, विपन्न विद्यार्थीलाई पढाएकोजस्ता खबरहरु बेलामौकामा सुन्न पाइन्छ । औसतरुपमा भन्ने हो भने राष्ट्रपतिदेखि सरकारका मन्त्री, सांसद्सम्मलाई विलासी गाडीको मोहले छाडेको छैन ।
यतिसम्म कि काठमाडौँमा घर हुने नेता, सांसद्ले पनि राज्यबाट पाइने घर भाडा रकममा पनि मन थाम्न नसकेको खबर सार्वजनिक भइसकेको स्थिति छ । राष्ट्रदोहन र राज्यकोषको दुरूपयोग बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा ढोरपाटनका मेयरजस्ता जनप्रतिनिधि जनताले खोजेका छन् । अहिले स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म रिबन काट्ने र तडकभडकमै समय व्यतीत गरिरहेको स्थिति छ । सरकारले जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न सकिरहेको छैन । राज्य आर्थिक विचलनको पराकाष्ठामा पुगिसकेको छ । सरकार र जनप्रतिनिधिमा दम्भ बढिरहेको छ । हामी जनताका सेवक हौँ भन्ने सोच भएमा मात्रै जनप्रतिनिधिप्रति जनताको विश्वास जागेर आउँछ । हामीले मेयर नेपालीको जस्तै सोच र सामाजिक भावना सबै जनप्रतिनिधिमा जागृत होस् भन्ने कामना गर्न परेको छ ।
शरद पौडेल, चितवन ।